कोरोना परीक्षणका लागि स्वाबबाट नमूना संकलन गर्दा मस्तिष्कमा क्षति पुग्दैन
एजेन्सी, ७ भदौ । कोरोना भाइरसको परीक्षणले मानिसको मष्तिष्कलाई हानि पुर्यारउँछ भन्ने दाबीसहितका कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका थिए ।
परीक्षणका लागि स्वाब लिँदै गरिएको तस्बिर व्यापक रूपमा शेयर गरिँदै स्वाब “ब्लड ब्रेन ब्यारीयर” बाट झिकिएको दाबी गरिएको थियो । तर, कोरोना भाइरसको लागि परीक्षण गर्दा नाकबाट निकालिने स्वाब ब्लड ब्रेन ब्यारीयरसम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुरा गलत रहेको बीबीसीमा उल्लेख गरिएको छ ।
मस्तिष्कलाई जोगाउनका लागि खप्पर, सुरक्षित झिल्ली र तरल पदार्थलगायतका थुप्रै तहहरूले यसलाई ढाकेको हुन्छ । रक्तनलीभित्र ब्लड ब्रेन ब्यारीयर कोषिकाहरूको कसिला तह हुन्छन् जसले मस्तिष्कमा प्रवेश गर्ने अणुलाई रोकेर अक्सिजन तथा पोषक तत्त्वहरूलाई मात्रै मस्तिष्कमा पठाउँने काम गर्छन् ।
नाकबाट पठाइने स्वाब स्टिक ब्लड ब्रेन ब्यारीयरसम्म पुग्नका लागि तन्तुका थुप्रै तहहरू पार गरी हड्डी र रक्त धमनीभित्र पुग्नुपर्छ । तर, तन्तु र हड्डीका थुप्रै तहहरू तोड्नका लागि दबाब चाहिने हुँदा स्वाब ब्लड ब्रेन ब्यारीयरभित्र पुग्न सक्दैन ।
ब्रिटिश न्यूरोसाइन्स असोसीएशनकी सदस्य डा. लिज कुल्टहार्डले कोभिड स्वाबबाट कुनै जटिलता आएको न्यूरोलजीको अभ्यासमा नदेखेका बताउँछिन् ।
लिभरपुल स्कूल अफ ट्रपिकल मेडिसिनका डा. टम विङ्फील्डले स्वाब निकाल्दा नाकभन्दा धेरै माथिसम्म जाने हुँदा केही असहज महसुस हुनसक्ने भएपनि पीडादायी नहुने बताउँछन् ।